မြန်မာနိုင်ငံသားများ အစိုးရသစ်အောက်တွင် စစ်မှုမထမ်းမနေရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြန်မာနိုင်ငံသားများ အစိုးရသစ်အောက်တွင် စစ်မှုမထမ်းမနေရ
မြန်မာနိုင်ငံသားများ အစိုးရသစ်အောက်တွင် စစ်မှုမထမ်းမနေရ
Posted by ကြယ်လေး on Jan 9, 2011 in Myanma News | 48 comments
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်နှင့် ၄၅ နှစ်ကြားရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အားလုံး စစ်မှု မထမ်းမနေရ ဥပဒေ မူကြမ်းတစ်ခုကို ဂျပန်NHK သတင်းဌာနက ရရှိထားကြောင်း ကြေငြာလိုက်သည်။
အမျိုးသားများမှာ အသက် ၁၈နှစ်နှင့် ၄၅ နှစ်ကြားဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ အသက်၁၈ နှစ်နှင့် ၃၅ နှစ်ကြား ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်ထဲ နှစ်နှစ် သို့မဟုတ် သုံးနှစ် အမှုထမ်းရမည်။ ခန္ဓာကိုယ် မစွမ်းမသန်သူများ မှလွဲလို့ အသက်ပြည့်မှီသူ အားလုံး မြို့နယ်အသီးသီးရှိ အာဏာပိုင်များထံ စာရင်းပေးသွင်း ရမည့်အကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ဟု ဆိုသည်။ စာရင်း ပေးသွင်းဖို့ ပျက်ကွက်သူနှင့် စစ်မှုထမ်းဖို့ တိမ်းရှောင်သူများမှာ ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်အထက် ကျခံရမည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ စစ်မှု မထမ်းမနေရ ဥပဒေကို မကြာမီ ကျင်းပတော့မည့် လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြု ပြဌာန်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း NHK သတင်းဌာနမှ ၂၀၁၁ ခု၊ ဇန်န၀ါရီလ ၇ ရက်၊ ဂျပန်စံတော်ချိန် ည ၇ နာရီ ၂၈ မိနစ်တွင် ထုတ်လွှင့်သွားခဲ့သည်။
သတင်း NHK (http://www.nhk.or.jp/daily/english/07_27.html )
Credit to : မောက္ခပြည်တွင်းသတင်း
မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ မဲပေးရသေးတယ်လေ ဒီစာအုပ်အပြင်ကိုထုတ်တယ် ဒီမှာအတိအကျပါတယ် နီးရာလူတွေ ဖတ်ကြည်ပေးပေါ့ ဒီမှာတော့ပါတယ်ပြောတယ် အစ်ကိုတို့ရေ
အဲ့ဒီတုန်းက ဘုမသိဘမသိနဲ့ မဲပေးခိုင်းတာ ဥပဒေ မူကြမ်းစာအုပ်ကို စုံစေ့အောင်ဖတ်ဖို့မပြောနဲ့ စာအုပ်အဖုံးတောင် ဘယ်ပုံမှန်းမသိဘူး ။ အဲ့ဒီအချိန်က ဒီလောက်အမှားတွေပေးခဲ့တာတောင် ဘယ်လိုမဲနိုင်မှန်းမသိဘူး ။ ဒီလို စစ်မှူထမ်းရမယ်ဆိုတာမျိုးရေးထားတာ သိခဲ့ရင် ဘယ်သူကမှ မဲသွားပေးမှာမဟုတ်ဘူး ။ အရူးအမဲသားကျွေးမိသလိုဖြစ်နေပြီ ။ တိုက်ပွဲတွေကလည်း ဖြစ်နေတော့ စစ်သားလိုအပ်လာတာပေါ့ ..ဒါပါပဲ … ရှေ့တန်းမပို့ဘူးလို့ ဘယ်သူ အာမခံချက်ပေးနိုင်မှာလည်း မိသားစု တာဝန်ကိုရော အဲ့ဒီ အချက်ထည့်ရေးတဲ့ ခွေးမသားက တာဝန်ယူမှာလား ။ ပြည်သူတွေ စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲ အတင်းကြပ်လုပ်ရင်တော့ လူထုအုံကြွမှူတွေဖြစ်လာပြီး အခြေနေတွေရုပ်ရုပ်သဲသဲဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ် မြင်ယောင်သေးတယ် ။
1. အချိန်ပြည့်ကျောင်းတက်နေရသူများ (ထိုသူများအနေဖြင့် ကျောင်းတက်နေစဉ် ကာလ တစ်လျှောက်တွင် ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး။ ကျောင်းပြီးသွားလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကျောင်းမှ ထွတ်လိုက်ရလျှင်သော်လည်းကောင်း ပြည်လည် စစ်မှုထမ်းရမည် ဖြစ်သည်။)
2. သိပ္ပံဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် သုတေသန လုပ်ဆောင်နေသူများ၊ ပရဂူဘွဲ့ ရရှိထားသူများနှင့် ထိုထက် မြင့်သော ဘွဲများ ရရှိသူများ။
3. ဆေးထောက်ခံချက် မရသူများ (သို့) ကျန်းမာရေးအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူများ။
4. သားသမီး နှစ်ဦးထက် ပိုသည့် မိခင်များ
လူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရတော့ လူတိုင်း စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အောက်မှာနေရမှာပေါ့
ကောင်းပါတယ်…. ကောင်းပါတယ်……. စိတ်ညစ်ဖို့